Saturday July 25, 2020 - 14:27:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaha dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si diirran usoo dhoweeyay go'aankii ay xildhibaanada baarlamaanka xilka uga qaadeen Xasan Cali Kheyre.
Qoraallo rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska Max'med Cabdullaahi Farmaajo ayuu ku taageeray shaqa ka eryiddii Xasan Cali kheyre iyo golihiisi xukuumadda "Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fedraalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo waxaa soo gaartay go’aanka ay Xildhibaannada Golaha Shacabka codka kalsoonida kala noqdeen Xukuumadda Ra'iisul-Wasaare Xasan Cali Kheyre" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Farmaajo.
Madaxtooyada Villa Somalia waxay sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo magacaabi doonto R/wasaare cusub islamarkaana ay soo dhowaynayso go'aankii uu qaatay baarlamaanka dowladda Federaalka "Madaxweyne Farmaajo wuxuu si degdeg ah usoo magacaabayaa Ra’iisul Wasaare soo dhisa xukuumad dalkan ka saarta marxaladdan kala guurka ah, siina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka" ayaa lasii raaciyay warka kasoo baxay xafiiska Farmaajo.
Marka la eego go'aanka halka dhinac ah ee kasoo baxay xildhibaannada iyo aqbalaadda degdegga ah ee Farmaajo waxaa cad in khilaaf muddo soo jiitamayay uu u dhaxeeyay labada mas'uul ee ugu sarraysa Xisbiga Nabad iyo Nolol, Max'med Cabdullaahi ayaa markii uu xilka qabtay sanaddii 2017 wuxuu ballan qaaday in R/wasaaraha uusan eryi doonin oo ay shaqada isla dhameysan doonaan balse ballanqaadkaas ayaa beenoobay.
Arrimaha dhaliyay khilaafka ay ku kala tageen Kheyre iyo Farmaajo ayaa ka dhashay hanaanka doorashada, wararku waxay sheegayaan in Kheyre uu doonayay in doorashooyinka waqtigooda lagu qabto halka Farmaajo uu diidanaa oo uu doonayay in lasameeyay waqti kororsi dhan muddo 2 sana ah.
Waxa loogu yeero beesha caalamka oo ah midda sida rasmiga ah ugu talisa dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa lafilayaa in ay ka qaadato go'aan kama dambays ah oo ku aaddan khilaafka dhaxdooda ah.